Xiaomi Mi Band 4: Wax walba oo aan ognahay illaa hadda | Androidsis
Xiaomi Mi Band 4: Waxa aan ilaa hadda ognahay
Xiaomi Mi Band 4 waa jiilkii afraad ee jijimadii sumcadda Shiinaha. Daahfurka ayaa loo qorsheeyay sanadkan, sida ay horayba u xaqiijiyeen shirkadda lafteeda illaa iyo hadda. Toddobaadyadii, waxaan bilownay inaan ogaanno faahfaahinta ku saabsan jijimadan sumadda Shiinaha, marwalba iyada oo loo marayo qulqulo kala duwan. Mar kasta oo aan ka helno xog dheeri ah oo ku saabsan, markaa way wanaagsan tahay in la soo ururiyo wax kasta oo aan illaa hadda ka ognahay.
Ka dib guushii jiilkii hore, maxaa haysta si caalami ah loo iibiyay ama suuqyada sida HindiyaMaaha wax lala yaabo in shirkaddu ay haddaba ka shaqeyneyso Xiaomi Mi Band 4. Jiil cusub oo ballan qaadaya inuu la yimaado isbeddello kala duwan, sida illaa hadda la helay.
3 Taariikhda sii deynta
Isbedelka ugu horreeya ee aan ku aragno jijimadu waa naqshadeynta. Munaasabaddan, nooca Shiinaha ayaa shaashad ballaaran ka billaabaya, taas oo xaaladdan ay noqon doonto 0,95 inji oo lagu xallinayo 240 x 120 pixels. Intaa waxaa dheer, waxay noqon doontaa shaashad taabasho waxayna gaari doontaa dadka kale midab ahaan, sida lagu arkay dhowr waxyaalood oo daadanaya. Shirkaddu waxay ku isticmaali doontaa guddi AMOLED jijimadan.
Sanadkii la soo dhaafay waxay horeyba nooga tageen shaashad ka weyn, marka waxay umuuqataa inaysan iyaga ku filnayn. In kasta oo la taaban karo, waxay ka dhigeysaa mid aad u fudud in loo isticmaalo Xiaomi Mi Band 4 nooc kasta oo xaalad ah. Waa faahfaahin muhiimad weyn u leh tan ku saabsan astaanta Shiinaha.
Arintaan waxaa horey ujiray warar xan ah ilaa iyo hada. Waxaa la ogaaday in jiilka cusub ee jijimadu ay la imaanayaan Bluetooth 5.0. Maxaa intaa ka badan, waxaa la filayaa inay jiri doonto nooc ka mid ah NFC, sidii dhacday sanadkii hore, inkasta oo noocani waligiis aan lagu sii deyn Spain. Su'aashu waxay tahay in Xiaomi Mi Band 4 cusub oo leh NFC iyo inkale laga bilaabi doono Spain.
Dareeraha garaaca wadnaha wuxuu mar kale muujiyaa dhexdeeda, oo ay la socoto horumarinno taxane ah, oo loogu talo galay in lagu caddeeyo qarnigan. Ma garanayno hadda wixii ka dambeeyay hagaajinta lagu soo kordhiyay, si loo wanaajiyo sax ahaanta hawlgalka. Laakiin waa mid ka mid ah howlaha xiddigta ee jijimadda.
Intaa waxaa dheer, waxaa suurtagal noqotay in la ogaado in Xiaomi Mi Band 4 cusub taageeri doonaa amarrada codka. Laga yaabee, nooca Shiinaha ee jijimadu inuu adeegsan doono kaaliyaha astaanta, oo loo yaqaan 'Xiao AI'. In kasta oo nooca caalamiga ah ay u badan tahay in Kaaliyaha Google loo adeegsado, si ay ula jaanqaado luuqado badan oo kala duwan isla waqtigaas. Ma jiraan wax xaqiijin ah oo ku saabsan isticmaalka mid ka mid ah kaaliyeyaasha jijin.
Bateriga jijinimada wali faahfaahin kuma hayno. In kasta oo xanta cusubi soo jeedinayso inay ku iman lahayd xamuul shisheeye. Waa nooc culeys ah oo noo ogolaanaya inaadan ka saarin qalabka aaladda si aan awood ugu yeelano inaan lacag ku qaadno. Xaaladdan oo kale, lacag-bixinteeda waxaa lagu fulin doonaa adabtarada. Tani waa wax aan ilaa hadda la xaqiijin.
Taariikhda sii deynta
Mid kale oo shaki weyn ilaa hadda. Xiaomi ayaa kaliya sheegtay ilaa iyo haatan in jijintan la bilaabi doono sanadka 2019, inkasta oo aysan bixin taariikhaha sanadka oo dhan. Noocii sanadkii hore wuxuu yimid suuqa bishii Juun, marka waa macquul in bishaan war aan helno. Maaddaama ay caadi tahay in summaddu ay soo saarto alaabteeda taariikho isku mid ah.
Laakiin waa inaan sugnaa dhowr maalmood ilaa aan wax badan ka ogaanno imaatinka Xiaomi Mi Band 4 ee suuqa, taas oo aan shaki ku jirin in ay leedahay wax walba oo guul u ah astaanta Shiinaha. Markii la arkay iibka wanaagsan ee jiilka saddexaad, layaab ma noqonayso in sannadkan ay ku sii kordhaan jijintan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi Band 4: Waxa aan ilaa hadda ognahay
Iibinta Samsung ee Spain ayaa kor u kacday